Wakiilka Gaarka ah ee QM James Swan Oo Qoraal Ka Soo Saaray Xaalada Somaliland - Horseed Media • Somali News
January 9, 2020Somali News
Wakiilka Gaarka ah ee QM James Swan Oo Qoraal Ka Soo Saaray Xaalada Somaliland
Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimah Soomaaliya James Swan ayaa qoraal saxafadeed uu soo saaray wuxuu kaga warbixiyay xaaladda Somaliland iyo safarkii uu ku tegay magaaladda Hargaysa maanta oo khamiis ah.
Qoraal Saxafadeedka ayaa sidan u qornaa:
Waxaa naga go’an inaan sii wadno wadashaqeynta Qaramada Midoobay ay la leedahay Somaliland iyo barnaamijyadeenna faraha badan ee lagu taageerayo dadkeeda. Iyadoo 16 xafiis, hay’ado, sanduuqyo, iyo barnaamijoy Qaramada Midoobay leedahay ay ka hawl-galaan Somaliland, ayaa taageeradeenu waxay iskugu jirtaa qaybo ballaaran oo xagga maamulka dowliga ah, amniga, horumarka, iyo barnaamijyada samafalka ah. Tusaale ahaan, shaqada QM waxaa ka mid ah taageeridda dugsiyada dhexe, qalabaynta iyo xirfad-dhisidda macallimiinta si ay u bixiyaan waxbarasho aasaasi ah oo tayo wanaagsan. Waxaan gargaar u fidinnaa dadka barakacayaasha ah iyo qaxootiyada ku nool Somaliland, ee kasoo cararay colaadaha ka jiro meelaha kale ama abaaro ay ku khasbeen inay kasoo tagaan deegaanadoodii. Waxaan taageernaa nidaamyada sarreynta sharciga, booliska iyo garsoorka. Hawlaha QM wey noocyo badanyihiin, laakiin waxay ka mideysanyihiin ujeedkooda oo ah in is-bedel wax ku ool ah oo wanaagsan ay helaan dadka iyo adeegyada dad weynaha ee Somaliland.